Mkpụrụ obi ndị ntorobịa NAD +: Coenzyme Dị Mkpa Na Ahụike Mmadụ
Ntorobịa Molecule NAD +: Coenzyme nke na-arụ ọrụ dị mkpa na Ahụike mmadụ
Mgbe nụrụ Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD +) ma ọ bụ “Isi iyi Ntorobịa”? ” N’ime ezigbo nri gị na mmega ahụ, a na-eme ahụ gị ka ọ nwee ezigbo metabolism.
N'ụzọ dị mwute, na ọrịa, nká na / ma ọ bụ ndụ adịghị mma, ahụ gị na-amalite ịhụ mmejọ dị iche iche nke na-ahụ ka arụmọrụ ya na-ada n'ụzọ dị egwu. Obere nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +) dị n'etiti adịghị ike ndị a, ọ bụkwa ebe ahụ NAD + emeju na abia n'aka iji mechie oghere erughi ihe, karisia iji kwalite usoro ime agadi.
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) na-ezo aka na coenzyme gụnyere adenine na nicotinamide. Celllọ obibi ọ bụla nwere ogige ọgwụ a, nke sitere na Nicotinamide Riboside. Ọkwa NAD dị n’ahụ mmadụ na-emetụta ogo ịka nká.
Enwere ụdị NAD abụọ, ya bụ, nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +) na nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) + hydrogen (H) (NADH). Nke gara aga nwere elektrọn abụọ ọzọ, nke ahụ bụkwa ihe edobere ya na nke ikpeazụ.
Gịnị bụ NAD +?
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +) bụ pyridine nucleotide nke dị ugbu a ma dịkwa oke mkpa na sel niile dị ndụ. Nke a pyridine nucleotide na - enyere ọtụtụ usoro ndu ebe ọ na - arụ ọrụ dị ka onye nrụpụta ihe yana yana mkpụrụ. Usoro ndị a gụnyere imepụta ume, mmezi DNA na mmezi ahụike, immunoregulation na nkwupụta mkpụrụ ndụ. Nke ahụ na - akọwa NAD + akara ịka nká.
NAD + na-arụkwa ọrụ dị mkpa na akara nke abụọ ozi na-egosi yana ọrụ immunoregulatory.
Dị ka mo-eto eto NAD + Achọpụtala dị ka isi ihe na - akpata usoro ịka nká. Ọmụmụ ihe dị iche iche akwadowo ọnọdụ ahụ na ọkwa NAD + dị n’ahụ mmadụ nwere mmekọrịta na -eme ka ntorobịa nke mmadụ. Nke dị elu karịa ọkwa NAD +, obere mkpụrụ ndụ, nke akwara na ele ahụ niile anya. Nke ahụ bụ ihe ndabere nke NAD + ịka nkata na-ewu ewu.
N’aka nke ọzọ, ụkọ NAD + nwere ike ibute ike ọgwụgwụ na ọrịa dị iche iche. N'ihi ya, ogo NAD + zuru oke dị mkpa maka ahụike mmadụ.
Kedu ka NAD + si arụ ọrụ?
Mgbe ahụ gị enweghị ike ịnweta enzyme ahụ dị mma na ọkwa mmepụta hormone, ọ na-amalite igosipụta nsogbu ahụike dị iche iche dị ka belata ikike, ncheta na ọnụego iche echiche. Nke a bụ n'ihi na enweghi ogo NAD + na NADH zuru oke iji kwado nhazi na arụ ọrụ sel sel.
Karịsịa, isi NAD + ọrụ bụ ịkwado mmeghachi omume metabolism nke anụ ahụ, site na ime ka nnyefe elektrọnik site na mole gafere ọzọ, site na usoro a maara dị ka mmeghachi omume redox. Site na mmeghachi omume redox, nri nwere ike ịtọhapụ ike nke echekwara na njikọta oxygen abụọ adịghị ike.
Dị ka ọ na-adịkarị, mkpụrụ ndụ ahụ gị chọrọ ume sitere n'ọbara akwara iji mee ka ha nwee ike ịrụ ọrụ dịgasị iche iche. Karịsịa, ike ha chọrọ bụ echekwa abụba na glucose. Yabụ, ọrụ dị mkpa NAD + enzyme dị ebe a bụ ịkwado njem nke isi mmalite ike sitere na ọbara ọbara gaa na sel ndị dị mkpa.
Mgbe fatty acids na glucose tọhapụrụ ume, NAD + enzyme na-eme ka mbugharị nke ume na mitochondria na-eme ka ntụgharị ọzọ banye na ike cellular. Ma ọ bụghị ya, ọ bụrụ na ụkọ NAD +, nnyefe nke ume na sel na-akụghasị, nke a na-akpata nkwụsịtụ mitochondrial, nke na-eme ka usoro ịka nká dị ngwa.
Maka NADH ọ bụla, NAD + na-enwe ike iwepụta mkpụrụ ndụ ATP atọ. N'ihi ume nke mkpụrụ ndụ, ị ga - agbakwu ume karị, ma n'uche ma anụ ahụ, n'ihi na NAD + enyela usoro ndu gị metụtara usoro ịba ụba ume site na iji oxidation.
Kpọtụrụ, ọrụ bụ isi NAD + gụnyere ime ka enzymes rụọ ọrụ maka mmeghachi omume redox n'ahụ. Enzymes ndị a ka a na-akpọ mkpokọta oxidoreductases. Ha gụnyere Sirtuin enzymes (SIRT), poly-ADP-ribose polymerases na cyclic ADP ribose hydrolase (CD38).
Na-elekwasị anya na ntinye Sirtuin, ọ dị mkpa ịmara na ọrụ bụ isi nke enwuva sirtuin bụ ịgbanyụ mkpụrụ ndụ ihe nketa nke na-enyere nká aka. Mkpụrụ ndụ ihe nketa gụnyere ndị na-ekere òkè na njikọta abụba na nchekwa, mkpali na nhazi shuga shuga. Maka enzymes sirtuin iji mezuo nke ahụ, ha chọrọ NAD + enzymes dị ka mkpụrụ ndụ NAD ndị a na-enyere ha aka iwepu ìgwè acetyl site na protein maka mgbanwe.
Ya mere, mmụba nke ọkwa NAD + na-atụgharị gaa n'ọtụtụ dị elu nke Sirtuins. Nke a na-ebute ịba ụba nke mitochondrial yana nwulite ume insulin.
Mmetụta nke mmezi metabolism dị otú a na-eduga n'ịgbanwe nsonaazụ nke afọ ụbụrụ, ekele NAD + ike ngbanwe nke ike. Ọzọkwa, ịdị mma nke insulin na-enyere ahụ gị aka ịnọgide na-enwe ọ̀tụ̀tụ̀ shuga dị elu ka ọ dị mma. N'ihi ya, mkpụrụ ndụ ahụ gị na - eyi obere ma na - akpa agwa karịa oge ntorobịa, na - eme ka ị nwee ọdịdị na - eto eto.
Ọzọkwa, a chọpụtawo NAD + dị ka ihe dị n'ime ala nke na-ahụ maka akara ngosi extracellular, nke na-abụ ntọala nke nkwukọrịta cell-cell. Ọzọkwa, ọ na-arụ ọrụ dị ka akwara neurotransmitter, na-ebufe ozi site na irighiri akwara na mkpụrụ ndụ ndị na-eme ka uru ahụ dị nro.
Uru / arụmọrụ NAD +
Enwere ọtụtụ NAD + bara uru yana ọrụ ndị gụnyere:
1.Proto sitere na ọnọdụ metụtara afọ ndụ
NAD + na-egbochi ịka nká bụ otu n'ime isi ihe kpatara ndị maara ahụike ji chọọ ịhụ ọkwa NAD + ha oge niile. Ka ndị mmadụ na-eme agadi, mmebi DNA ha na-abawanye, nke a na-akpata mbelata nke ọkwa NAD +, ọrụ SIRT1 na-ebelata ma belata ọrụ mitochondrial. Nke a na - eme n'ihi nrụgide oxidative cellular, nke, n'asụsụ layman, pụtara na antioxidants anụ ahụ na ndị na - enweghị ihe ọ bụla na - edozi.
N'ihi ya, onye mere agadi nwere ike ịdaba n'ọnọdụ ahụike dị iche iche dịka atherosclerosis, ọrịa obi, ọrịa ogbu na nkwonkwo, cataracts, ọrịa shuga na ọbara mgbali elu, n'etiti ndị ọzọ.
Ọ dabara nke ọma, ọtụtụ nnyocha na-egosi na NAD + na-enye sel akwara nchedo nchekasị. Ya mere, ị Nụ NAD + nri, inye nkwado ma ọ bụ itinye usoro ndozi ọkwa NAD + nwere ike inyere ndị agadi aka, ọkachasị ndị gaferela afọ iri ise, ka ha nwee ahụike ọbụladị ka ọnụnọ ha n'ụwa na-abawanye.
NAD ndị ọzọ na - eme ka arụmọrụ dị mma ma kwado uto nke mitochondria. Ọ na-arụ ọrụ dị mkpa na ndozi nke ọkwa ATP zuru ezu na mkpụrụ ndụ, nke agaraghị ekwe omume site na ịka nká.
2. Ahụhụ ike ọgwụgwụ
Dịka e kwuru na mbụ, NAD + na-akwado ike mmepụta nke mitochondria nke ahụ gị. Mgbe mitochondria emeghi ike zuru oke, akụkụ ahụ ndị dị mkpa dịka obi, ụbụrụ, akwara na ngụgụ anaghị enwe ike ịrụ ọrụ nke ọma na nke a na-eduga ike ọgwụgwụ na mkpali belata.
N’aka nke ọzọ, mgbe ahụ gị nwere ogo NAD + zuru oke, akụkụ ahụ ndị a na-enwe ike ịrụ ọrụ na-arụ ọrụ ahụike, n'ihi nke a, ị na-enwe ume, ike, ndụ na ọgụgụ isi. Mkpụrụ ndụ niile dị ndụ chọrọ coenzyme a ka ọ na - akwalite mmepụta nke adenosine triphosphate.
Mkpụrụ ndụ na-eji ọgwụ adenosine triphosphate mepụta ike nke akụkụ ahụ gị dị iche iche chọrọ maka arụmọrụ chọrọ. Mgbe enyere gị ahụ ike, mkpụrụ ndụ gị na - enwe ike ịlụ ọgụ niile ike gwụ nke ọma.
3.Ọrụ ụbụrụ dị mma
Ike ọgwụgwụ na-eme ka ọrụ ịma ihe gị kwụsịlata. Ọ na - eme gị iwe dịka a ga - asị na uche gị siri ike ma ọ bụ igwe ojii. Agbanyeghị, anyị ahụworị na NAD + na-eweta enyemaka ahụ gwụrụ. Yabụ, coenzyme na-ebuli ọrụ ụbụrụ gị ike site na ime ka mmepụta ume gị zuru ezu maka mkpụrụ ndụ ụbụrụ gị, na-eme ka ha nwee ike ịlụ ọgụ ike ọgwụgwụ. N’ihi nke a, ụbụrụ gị na-agbakwu anya ma nwee ume zuru ezu iji rụọ ọrụ dị iche iche chọrọ ka ị chee.
4.Nkwesighi nguzogide cell
N'otu nnyocha emere iji gosipụta mmetụta nke NAD + na nrụgide oxidative cellular, ndị nchọpụta chọpụtara na NAD + ọgwụgwọ mere ka mkpụrụ ndụ lab ahụ nwekwuo nrụgide. N'aka nke ọzọ, mkpụrụ ndụ ndị a na-enyeghị na NAD + dabara n'ihe isi ike. Ya mere, ọ pụtara na coenzyme a na - abawanye ndụ nke sel gị, na - enyere ahụ gị aka ịlụ ọgụ dị iche iche na - akpata ọrịa n'ụzọ dị irè karị.
5.DNA rụkwaa ọrụ maka ogologo ndụ gị
Na ndụ gị kwa ụbọchị, ị na-ekpughere ihe dị iche iche na ọnọdụ ndị nwere ike imebi DNA gị. DNA mebiri emebi na-ebelata oge ndụ gị. Agbanyeghị, ịnwe NAD + zuru oke n’ahụ gị, coenzymes ndị a na-akwado mmezi nke mmezi mebiri emebi site na ibugharị ndị electrons na mpaghara nwere DNA mebiri emebi. Nke a bụ dị ka ọtụtụ nyocha nke kwubiri na njuju nke NAD + na-agbatịkwu ndụ anụmanụ ma ọ bụ mmadụ.
6.Mgbe ụra na oge iri nri
Ndị nchọpụta dị iche iche achọpụtala na NAD + nwere mmetụta dị egwu na usoro ụra mmadụ yana usoro agụụ. Oge ị na-ehikarị ụra ma ọ bụ na-eteta n'ụra na ụbọchị ị na-ahụkarị ụbọchị gị na-adabere na ụda obi gị. Ọzọkwa, mmepụta kemịkalụ nke homonụ agụụ na-emetụta ahụ gị nke ọma site na kemịkal na kemịkalụ.
Mmekọrịta dị mma n'etiti sirtuins na NAD + rụpụtara na a hemat cardiac n'afọ iri na ụma na agụụ. Ma ọ bụghị ya, mmeghasị nke NAD + ma ọ bụ oria na-akpata uto na-adịghị mma, si otú ahụ na-eri nri na-ehi ụra na usoro ihi ụra. Ya mere, NAD + na-abịa ọsọ ọsọ maka ụra dị mma na usoro iri nri. Isoro abụọ a, ọ ga-adịrị gị mfe ịmebe ma nọgide na-enwe ezigbo ahụ ike.
Site na ịnye ọrụ niile dị n'elu, ọrụ doro anya, NAD + na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'inyere ndị mmadụ aka ibi ndụ dị mma ọbụna n'oge agadi.
Ngwa / Ojiji NAD +
1.Amụta ikike na ebe nchekwa
Ọtụtụ ndị mmadụ mara na kemịkalụ kemịkalụ a na-enye eke
mweghachi na mmezi nke ụzọ akụkụ ụbụrụ na ụbụrụ.
Ọzọkwa, ọ na-ewepụ ike ọgwụgwụ na n'ozuzu ya, si otú a mee ka idoanya ọgụgụ isi doo anya.
N’ihi ya, mmadụ ga-enwe ike ịmụ ma na-echeta nke ọma.
2.Thicker mbọ na ntutu
Ntu na ntutu ka a na-ahụkarị iji kọwaa ịma mma mmadụ, ọkachasị ụmụ nwanyị. N'ihi ike ya ịkwalite mmezi nke DNA mebiri emebi, NAD + dị mkpa maka mbọ na ntutu dị oke mkpa. Ka o siri dị, ọ bụ ogige ọgwụ achọsi ike maka ndị na-eche maka ntutu dị gịrịrị na / ma ọ bụ mbọ.
3.Better anụ ahụ
Ka nkata n’etiti ndị mmadụ na-ebute ntụpọ anụ dịka wrinkles, larịị mara mma na ụdị enweghị atụ. Agbanyeghị, ndị chọrọ ịgbagha ihe mgbaàmà ha merela agadi na-ewere ọgwụ NAD +, nke na-arụ ọrụ nke ọma maka ebumnuche. Na NAD + mgbochi ịka nká uru dị ewu ewu.
Ka ndị mmadụ na-aka nká, ha na-adị nkenke ma na-esighi ike n'ihi nsị akwara nke na-abịa na nká. Agbanyeghị, ndị ahụ chọpụtara ike igbochi ọgwụ NAD + na-etinye ya n'ọrụ iji meziwanye akwara ọrụ ha.
5.Papụ nke ọrịa ndị metụtara afọ
Ọzọkwa, ndị mmadụ nwere NAD + dị ala n’ahụ ha n’ihi ịka nká na-achọ ụzọ ndị ọzọ si enweta mmiri ọgwụ ahụ iji bulie ọgụ ha. Ihe ndị ọzọ a na-enye enzyme ahụ na-enyere ahụ ha aka inwe ike iguzogide ọrịa dị iche iche metụtara agadi.
NAD + onunu ogwu
Ọ bụ ezie na NAD + bụ ogige sitere n'okike, a ga-ewererịrị ya na imeru ihe n'ókè. Dabere na ụlọ ọrụ nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ (FDA), nke kachasị nchebe NAD + onunu ogwu dị ọtụtụ gram abụọ kwa ụbọchị. Oge akwadoro ọgwụgwọ bụ ụbọchị 7 ruo 16, dabere na akụkọ banyere ahụike nke onye ọrụ.
Nsonaazụ nke ịda NAD + ọkwa
Ọ bụ ihe dị mkpa nye onye ọ bụla iji hụ na ha nwere ọkwa NAD + zuru oke. Asingba
NAD + dị mkpa maka ndị mmadụ nwere ụkọ NAD. Nke a bụ n'ihi ụkọ NAD + nwere ọtụtụ nsonazụ na-adịghị mma nke gụnyere:
1. Ihe ịrịba ama nke ịka nká
N'ime onye na-eto eto, NAD + na NADH dị n'ọtụtụ dị elu ma e jiri ya tụnyere ọkwa dị na ndị okenye. Mbelata ọkwa NAD + na afọ na-eduga n'ịbelata ọrụ SIRT1, si otú a na-eme ka ihe ịrịba ama nke ịka nká mee ka ọ dị ngwa. N'ọnọdụ dị otú a, ụzọ kachasị dị irè iji gbanwee ma ọ bụ gbochie ihe ịrịba ama ndị ahụ bụ ịbawanye ogo NAD + n'ime ahụ. Site na mmụba coenzyme ga-akpalite ọrụ SIRT1 ọzọ, si otú a nwekwuo ume na mmetụta.
Hypoxia bụ ọnọdụ mara ọkọnọ oxygen dị n’ahụ mmadụ. Ọnọdụ ahụ na-eduga n'ịba ụba NADH na ala NAD + ma nwee njiri mara ya dị ka ịpụpụ akpụkpọ ahụ, ọgba aghara, obi obi dị nwayọ, ike iku ume, ọsụsọ na ụkwara na-adịgide.
Ndị mmadụ na-arịa hypoxia nwere ike nweta ahụ efe site na mgbaàmà ha site na ịba ụba ọkwa NAD + ha. Ndị ahụ nọ n'ọnọdụ dị elu nke ọnọdụ ahụ nwekwara ike belata ikike ha site na ịbawanye ọkwa NAD + ka mma.
3. Anwụ anwụ na-emebi na akpụkpọ
Egwu anwụ anwụ ma ọ bụ mmebi nke anụ ahụ n'ihi ikpughe ọkụ anyanwụ? NAD + na NADH ikpuchiri gi. Ha abụọ na-enye akpụkpọ ahụ gị nchebe site na anyanwụ yana ọrịa kansa anụ ahụ site na ịmịcha ụdị ihu igwe UVB na UVA n'otu n'otu.
4. ike ọgwụgwụ
Ọ bụrụ na ị na-enwe ike ọgwụgwụ dị omimi na adịghị ike anụ ahụ niile, ị nwere ike inwe ọkwa NAD dị ala, yabụ belata ọrụ SIRT1. N'ọnọdụ dị otú a, mgbakwunye NADH ma ọ bụ NAD + nwere ike ịkwụsị mgbaàmà ike ọgwụgwụ site na ịkwalite ọrụ mitochondria.
5. Ọrịa Metabolic
Site na mbido nke Sirtuins, NAD + na-arụ ọrụ nke mkpụrụ ndụ ihe nketa na-emetụta mkpụrụ n’usoro. Dika, ndi mmadu nwere nsogbu banyere oke ibu n'ihi metabolism na ezughi oke nwere ike nweta ogo nke ha choro site na NAD +. Nke a nwekwara ike ịbụ ụzọ dị mma maka gị ma ọ bụrụ na ị na-atụ ụjọ ibu dị arọ na-adịghị mma ma ọ bụ kọleji LDL dị elu n'ihi nrụpụta metabolism.
6. Ọrịa obi
Ọrụ NAD + n'ime ahụ na-emetụta ọrụ mitochondria, nke dị oke mkpa maka ịrụ ọrụ obi kwesịrị ekwesị. Enweghi ike nke ogige bekee nwere ike mee ka obi daa mba ngwa ngwa, ihe mmadu n’enweghi ike ichota. Yabụ, ọ bụrụ na ị nwere ọkwa Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD +) dị ala, ikekwe n'ihi mmerụ ahụ ischemia-reperfusion ma ọ bụ ọrịa obi ọ bụla ọzọ, ị ga-enwe ahụike ka ahụike obi gị ga-aka mma ịkwalite ọkọnọ coenzyme ahụ gị.
7. Ọtụtụ Sclerosis (MS)
Na-ata ahụhụ site na otutu sclerosis? Ọ bụrụ ee, mgbe ahụ ị ga-eche echiche banyere uru NAD + ntụ ntụ site NAD + emeju oriri maka ọrịa ahụ efe efe.
A na - ahụ ọtụtụ ọrịa Sclerosis dị obere site na ọkwa NAD + na usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ mgbe usoro ụjọ ahụ na-enwe ụkọ nke otu. Ngwunye NAD + ga-ebelata ụkọ nke kemịkal na usoro ụjọ ahụ, wee mezie mgbaàmà MS gị.
8. Ahụike ụbụrụ na ọnọdụ neurodegenerative
Ọ bụrụ na ịnwee ahụike ọgụgụ isi ma ọ bụ ọnọdụ nhụjuanya dịka ọrịa Alzheimer, ọrịa ma ọ bụ ọrịa Parkinson ma ọ bụ ọrịa strok, mgbe ahụ mgbakwunye NAD + dị mma maka mweghachi nke ahụike gị. Nke a bụ n'ihi na ọnọdụ ndị a na-akpata NAD + erughi, na-eduga n'ibelata ike ụbụrụ gị na dopamine. Ebe ike ụbụrụ na dopamine bụ ihe dị mkpa nke sistemụ ụbụrụ na nke ụjọ, ihe mgbaàmà gị nwere ike ịka njọ ma ọ bụrụ na ịchọtaghị ụzọ ị ga-esi mee ka NAD + dị elu.
Kedu ka ị ga-esi mee ka NAD + dịkwuo elu?
1. Isesrụ mmega ahụ
Ka ị na-etolite, mmega ahụ dị mkpa maka ahụike gị. N'iji mmega ahụ nkịtị oge niile, ikike ahụ gị nwere imepụta NAD + bụ nke a na-ahụ anya. I choro ike iji mega omimi ahụ. Yabụ, ka ị na-emega ahụ, ahụ gị niile na-arụpụta ike site na-akpalikwu mitochondria mmepụta. N'ihi ya, ọkwa NAD gị na-abawanye n'ụzọ nkịtị.
2. Ibu ọnụ mgbe niile
Ọ bụ ezie na a na-ebu ọnụ ebu ọnụ dị ka ụzọ nke nraranye okpukpe, ọ nwekwara uru ahụike dị iche iche iji nye, gụnyere ịbawanye ọkwa NAD + na ntinye SIRT1.
3.Ewebiga oke ọkụ anwụ
Ihe na-enye ultraviolet sitere n’anyanwụ na-eme ka ịka nkpa nke gị nwee ike ịka nká. Nke kadị njọ, mmadụ ịkarịrị ìhè anyanwụ na-emebi ụlọ ahịa na-enye aka na ndozi nke sel anụ ahụ mebiri emebi. Nke a na - eduga nbelata ọkwa NAD +. Dị ka nke a, iji gbochie nke a ime ma nyere ahụ gị aka ịnọgide na-enwe ọkwa NAD + dị mma site na ịzere ikpughe oke nke ìhè anyanwụ mgbe ọ bụla ị nwere ike. Ọzọkwa, chebe onwe gị ka ihe ọ bụla mebiri emebi nke anyanwụ site na iji akpụkpọ anwụ kpuchie akpụkpọ gị mgbe ị na-apụ n'èzí n'ụbọchị anwụ na-acha.
4. Na-ewere mmeju NAD +
Ọ bụ ezie na nri na-edozi ahụ kwesịrị ekwesị bụ nri dị mkpa nke ezigbo NAD + na-enye ahụ anyị, mgbe ụfọdụ, a ga-eme ihe ọzọ. Karịsịa, ndị dị afọ 50 chọrọ NAD karịa karịa nri nri kwesịrị ekwesị nwere ike inye. N'okwu a, ihe mgbakwunye NAD na-eweta bara uru. Ihe mgbakwunye ndị a na-abịa n'ụdị capsules ma dị mfe ịchọta. Ha nwere vitamin B3 (nicotinamide riboside) nke emesiri gbanwee NAD + n'ime ahụ.
5. Ihi ụra nke ọma
Sleep nweta ezigbo ụra n’ụbọchị ọ bụla bụ ụzọ ọzọ eji eme ihe maka ịkwalite ogo nke kemịkalụ kemịkalụ. Ezigbo ụra izu ike na-eme ka imepụta ihe ndị na - eme ka ihe ndị dị ndụ na - arụ ọrụ n'ahụ gị.
6.Nweta nri NAD
Ndị ọrụ nchọpụta achọpụtala na, nicotinamide riboside, ụdị vitamin B3, na-agbanwe n'ime NAD + n'ime ahụ. A na-eji coenzymes ahụ, dịka NAD + nke ahụ na-emepụta ahụ, na-arụ ọrụ dị iche iche nke na-eme ka ọ kwụsịlata ma ọ bụ gbanwee usoro ịka nká na ahụ mmadụ. Dịka, nri nwere vitamin a (nri NAD +) nwere ike inye nnukwu mgbakwunye NAD +.
Nri nwere nicotinamide riboside, nke ị ga-atụkwasị obi iji meziwanye ọkwa NAD + dịka:
Mmiri ara ehi: Nnyocha na-egosi na lita mmiri ara ehi ọ bụla nwere 9 olmol nke NAD +.
Azụ: ụfọdụ ụdị azụ dị ka tuna na salmon bụ ọgaranya na NAD +. Ihe NAD + n’ime otu iko tuna bụ ihe dị ka 20.5mg na 10.1mg maka salmon.
Ngwurugwu nke Crimini: Ọ bụrụ n ’ị aụ iko nke Crimini Mushroom, ị ga - eweta ahụ gị na 3.3mg nke NAD +.
Anụ anụ: ma ọ bụ stewed, nke a roara n'ọkụ ma ọ bụ nke achicha, otu iko anụ ọkụkọ ga-enye gị 9.1mg nke NAD +.
Yist oriri: Yist bụ ihe bara ụba NAD + ma e jiri ya tụnyere mmiri ara ehi. Yabụ, ihe oriri na-eko achịcha dịka achịcha na achịcha nwere ike itinye aka na njuju afọ NAD +. Ọ bụ ezie na biya nwekwara ike ịbụ isi iyi nke coenzyme, a ga-ewere ya na oke.
Green veggies: Vegetablesfọdụ akwụkwọ nri akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ NAD + nri , karịsịa peas na asparagus, bara ụba na ogige na-akwalite ntorobịa NAD +. Iko peas nwere, 3.2mg nke NAD + ebe iko asparagus nwere 2mg nke ogige ahụ.
Itinye nri nri ketogenicBeingnọ na nri keto pụtara ịmachi na nri ndị nwere abụba ma dịkwa obere carb. Mgbe ị na-eri nri a, ahụ gị na-abanye na steeti a maara dị ka ketosis ebe ọ na-eji abụba karịa glucose maka ike. Nke a na - eme ka NAD + na NADH mụbaa.
Facfọdụ Ihe Na-agbanwe NAD +
Enwere ike ibute ọkwa NAD + dị ala site na ọtụtụ ihe gụnyere:
1. Ọrịa na-adịghị ala ala
Ọrịa na-adịghị ala ala na-egbochi enzyme NAMPT na mkpụrụ ndụ ihe na-akpata usoro ọgbụgba gburugburu. N'ihi ya, ọkwa NAD + dara.
2. Ọgba aghara aghara aghara aghara aghara aghara aghara na okirikiri nke Circadian
Mmepụta NAD + chọrọ enzyme NAMPT, ọkachasị na ngwụcha nke usoro a. Agbanyeghị, mgbe mmadụ mebiri ụdị ụda ịgba mmadụ gburugburu, mkpụrụ ndụ ihe nketa nke imepụta enzyme ya bụ nke dịzi ma na nsonazụ nke imepụta NAD + na ahụ belata.
3. Nnukwu ọbara shuga na ọkwa insulin
Mgbe ọkwa ọbara shuga na insulin na-abawanye oke, oke NADH / NAD + na-abawanye. Nke a pụtara na ego NADH dị elu karịa ma e jiri ya tụnyere ọkwa NAD +.
4. Abuse abuseụbiga mmanya ókè
Ọtụtụ nyocha na-egosi na nrụgide ethanol n'ihi nke a Alcohol consumptionụ mmanya na-egbu egbu kpatara ihe dị ka 20% mbelata na ọkwa NAD +. Nke a bụ n'ihi na mmanya na - akpata mmerụ ahụ oxidative nke na-egbochi mmepụta nke coenzyme.
5. Nbibi nke DNA
Mgbe ihe mebiri emebi na DNA nke ukwuu, ihe ndị ọzọ PARP ga-achọ
rụkwaa ma weghachi ọrụ ndị dị na DNA mebiri emebi. Ebe obu na molekulu di
nke NAD kwadoro, yabụ ọ pụtara na itinyekwu aka na ya nwere ike
hụ ụkọ nke kemịkal dị na ahụ onye ahụ.
6. Ọrụ sirtuin dị ala
N'iburu n'uche na sirtuin na-achịkwa ụda rute gburugburu, belata ọkwa sirtuin nwere ike imebi ebbadian na mmiri. N'ihi ya, ọkwa NAD + na-ebelata.
Ffe Nwere Mmetụta Ọ Na-akpata NAD +?
N'ọtụtụ ọnọdụ, ntinye NAD + dị ezigbo mma. Ihe omumu nke mmadu mere iji guzobe onodu nchekwa nke ime ka coenzyme di na aru na egosi na 1,000mg kwa ubochi nke 2,000 mg NAD + kwa ubochi enweghi nsogbu ndi mmadu.
Otú ọ dị, e nwere okwu ole na ole ebe a kọọrọ mmetụta dị nro na-eme n'ihi oriri NAD +. Mmetụta ndị a gụnyere ọgbụgbọ, afọ mgbu, isi ọwụwa, oké ike ọgwụgwụ (ike ọgwụgwụ) yana afọ ọsịsa
Ozi ndị ọzọ gbasara NAD +
NAD + ntụ ntụ, nke a na-eji eme ihe mgbakwunye NAD +, dị ọcha, hygroscopic na mmiri nwere ike ịgbanye. Usoro ọgwụ nke NAD + ntụ ntụ is C21H27N7O14P2.
Ọ bụrụ na ị bụ onye nrụpụta enyere aka ma nwee mmasị na NAD + ntụ ntụ maka NAD + emejuputa ahia, gbaa mbọ hụ na inweta ya site na ebe a na-akwụghachi ụgwọ iji zere ịzụta adịgboroja. Shouldkwesịrị ịchọpụta na ị na-emeso onye na-ere ahịa tụkwasịrị obi ihe mgbe ị na-azụ mgbakwunye NAD. Rịba ama na ịnwere ike ịtụ NAD + ntụ ntụ ma ọ bụ NAD + ntanetị n'ịntanetị.
NAD + coenzyme bụ molekul na arụ ọrụ dị mkpa na ahụike mmadụ. Uru NAD +, nke gụnyere ahụike kachasị mma, nrụgide nrụgide na mmezi DNA, karịrị mmetụta ole na ole ndị metụtara njikọta nke coenzyme. Na mgbakwunye, NAD + uru ịka nká bụ ihe ndị chọrọ ịgbagha ihe ịrịba ama nke ịka nká kwesịrị ilekwasị anya site na mgbakwunye NAD +. Agbanyeghị, ọ dị mkpa ijide n'aka na ị nwetara Nicotinamide Adenine Dinucleotide / NAD + ntụ ntụ ma ọ bụ NAD + nchịkọta site na isi ntụkwasị obi.
Anderson RM, Bitterman KJ, Wood JG, et al. Mgbagha nke ụzọ NAD + nuklia nke dị adị na-egbu oge ịka nká na-agbanweghị ọkwa NAD + nke na-agbanwe agbanwe. J Biol Chem. 2002 Mee 24; 277 (21): 18881-90.
Gomes AP, Ọnụahịa NL, Ling AJ, et al. Ibelata NAD (+) na - eweta pseudohypoxic nke na - akụghasị nkwukọrịta nuklia-mitochondrial n'oge ịka nká. 2013 Dec 19;155(7):1624-38.
Imai SI, Guarente L. NAD na sirtuins n'ịka nká na ọrịa. Cell Trends Trends.2014 Aug;24(8):464-71.
Ọnụahịa NL, Gomes AP, Ling AJ, et al. A chọrọ SIRT1 maka AMPK na-arụ ọrụ na nsonaazụ bara uru nke resveratrol na ọrụ mitochondrial. Cell Metab. 2012 Mee 2; 15 (5): 675-90.
Satoh MS, Poirier GG, Lindahl T. NAD (+) - ịdabere na ndozi nke DNA mebiri site na mkpụrụ ndụ mmadụ. J Biol Chem. 1993 Mar 15; 268 (8): 5480-7.
Sauve AA. NAD + na vitamin B3: site na metabolism rue usoro ọgwụgwọ. J Pharmacol Exp Ther. 2008 Mar;324(3):883-93.
1. Gịnị bụ NAD +?
2. Kedu ka NAD + si arụ ọrụ?
3. Uru dị na NAD +
4.The Ngwa / uru nke NAD +
5.NAD + usoro onunu ogwu
6.Nsonaazụ nke ịda NAD + ọkwa
7.Ha ga-eme ka NAD + dị elu dị ka o kwesịrị?
8.Mazi ihe ndi n’emebi NAD +
9.Ọ nwere Mmetụta Ọ Na-emetụta NAD +?
10.Ihe omuma banyere NAD +